FC Platinum head coach Norman Mapeza
Umqeqetshi weqembu lomdlalo wenguqu ele FC Platinum uNorman Mapeza uthi leliqembu selikulungele ukuqala kwemidlalo yalonyaka eyesigaba sePremier Soccer League ngemva kokuphelelwa kwalo ngumphako emncintiswaneni weCAF Champions League.
Intshanthu zakuleli iqembu leFC Platinum beliphatheke kumidlalo yeCAF Champions League ngesikhathi imidlalo yesigaba sePSL ikukhefu.
Limidlalo ikhangelelwe ukuqala ekupheleni kwenyanga kaMbimbitho njalo umqeqetshi weqembu leFC Platinum uNorman Mapeza utshele intathelizindaba zemidlalo ukuba ukuphatheka kwabo kumidlalo yeCAF kubabeka esimeni esihle esokuthi baqale kuhle imidlalo yalonyaka.
“Ngemva kwamaviki amabili siyaqala imidlalo yeligi njalo thina akula amalungiselelo esizawayenza ngoba sivele besiphatheke kumidlalo yeCAF Champions League.
Ngalokho ke angeke ngithi mina kukhona esikwenzayo okuyingxenye eyokulungiselela ukuqala kwe ligi kodwa iqiniso yikuba sesilinde ukuqala kwemidlalo nje kuphela.”
Bekungokwakuqala ukuba iqembu leFC Platinum lifenyelele kusigaba sezibaya selokhu liqale ukuphatheka kumncintiswano weCAF Champions League ikanti amaqembu ebelidlala lawo wona alesikhathi eside ephatheka kulumncintiswano njalo akujwayele ukudlala kulelizinga.
Iqembu leEsperance elase Tunisia, lona eliphutshe imidlalo yezibaya lihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo elitshumi lane kanye lele Horoya AC elase Guinea, lona eliphutshe imidlalo yalo lisendaweni yesibili lilemiklomelo elitshumi, yiwo adlulele kusiga se quarter – final ephuma kusibaya sika Group B kwathi ele Orlando Pirates lona eliphutshe imidlalo yalo lisendaweni yesithathu lilemiklomelo eyisithupha, lalo liphelelwe ngumphako ndawonye lele FC Platinum.
Umhlubulo wangezansi yezwekazi lase Africa usele umelwe liqembu le Mamelodi Sundowns lona eliphutshe imidlalo yezibaya lisendaweni yesibili kusibaya sika Group A ngaphansi kweqembu leWydad Athletic Club okuyilo eliphutshe lisendaweni yakuqala.
Amanye amaqembu adlulele kusigaba sama quarterfinals ngabalisa ele TP Mazembe elase Democratic Republic of Congo kanye lele CS Constantine elase Algeria, wona abekusibaya sika Group C kuthi kusibaya sika Group D kuphumelele iqembu le Al Ahly SC elase Egypt kanye lele Simba SC elase Tanzania.
Uhlelo lokuba amaqembu afinyelele kusigaba se quarterfinal azaxegwa njani luzaqhutshwa ngoLwesithathu.